Apple ayaa ku riixeysa alaab-qeybiyeyaasha inay yareeyaan farqiga faa iidadooda | Wararka IPhone
Shirkada ku saleysan Cupertino waligeed laguma aqoon inay qalabkeeda ku bixiso qiimo jaban. Xaqiiqdii, sannad kasta marmarsiiyo laga yeesho isbeddelada lacagta, wuxuu had iyo jeer maareeyaa inuu sare u qaado qiimaha moodellada cusub ee uu ka billaabayo suuqa. Dhibaatadu waxay tahay in uu imaan doono waqti dadka isticmaala ay laba jeer ka fekerayaan markay cusbooneysiinayaan qalabka sanad walba ama labadii sanoba mar ayna kordhiyaan muddada isticmaalka, gaar ahaan iPhone-ka. Gaar ahaan tan iyo markii la bilaabay iPhone 6 Plus, waxaan go'aansaday inaan naftayda beero oo aan cusbooneysiiyo terminaalka ugu yaraan labadii sanoba mar, tan iyo pWaxaan qabsadaa 1000 euro sanad walba taleefan, waxay umuuqataa wax doqonimo ah in la sameeyo, meel kasta oo aad ka eegtidba..
Waxay u muuqataa in Cupertino ay ka walaacsan yihiin iibka hooseeya ee qalabkoodu ku dhibtoonayo bilowga sanadka, halkee mid ka mid ah sababaha ugu cad cad waa qiimaha boosteejooyinka. Shirkaddu way ka warqabtaa tan waxayna umuuqataa inay rabto inay ilaaliso ama hoos u dhigto qiimahooda waxyar. Sida laga soo xigtay Digittimes, Apple waxay ku riixaysaa alaab-qeybiyeyaasha inay isku dayaan inay yareeyaan kharashyada inta ugu badan ee suurtogalka ah si ay qaybaha ay sameeyaan u jaban yihiin.
Ka mid ah alaab-qeybiyeyaasha sida aadka ah u saameynayo cadaadiskan waxaan ka helaynaa Foxconn iyo Pegatron, laakiin iyagu maahan kuwa keliya, tan iyo bixiyeyaasha kale ee yaryar sidoo kale waxaa saaran cadaadis shirkaddu inay isku daydo inay yareyso sicirka waxsoosaarka qayb kasta illaa ugu badnaan.
Apple waxay ballaarineysaa noocyada adeeg bixiyeyaasha raadinta midda soo bandhigta tayada ugu fiican qiimo lagu hagaajiyay. Aynu rajaynno in shirkaddu ay isku dayeyso inay yareyso qiimaha badeecadeeda, iPhone, iyadoo isku dayaysa inay hagaajiso qiimaha qaybaha oo aysan isticmaalin waxyaabo ka jaban kan muddada dhow, waxa kaliya ee ay na siin doonaan waxay noqon doontaa dhibaatooyinka hawlgalka qalabka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Apple waxay ku riixaysaa iibiyeyaasha inay yareeyaan farqiga faa iidadooda
Miyuu Apple cufaayaa alaab-qeybiyeyaasha? Waxaan u maleynayaa in xalka uusan taa aheyn ... Xalku wuxuu yahay iyaga laftooda inay jeebka giijiyaan iyo inbadan, inay iyagu yihiin kuwa ugu taajirsan meeraha, waa in anshaxeygu inbadan i taabto! Immisa ayey ku kacaysaa sameynta iPhone? 200 ugu badnaan 300 $, waxaan rajeynayaa sanadkan .. Hayso qiimayaasha, maxaan u arkay wixii aan arkay .. Waxay noqon doontaa isla naqshadda oo leh 3 dibin daabyo badan, haddii qiimuhu sare u kaco .. Dabcan waa sidaas si ay dadku u joojiyaan iibsashada iPhone, haa maya .. 8-da ayaa ku kacaya sida MacBook .. Waa wax aad looga xishoodo! Kaliya waxaan ubaahanahay inaan arko "iPhone pro" qiimaha xanta kadibna haa haa, isbedelka sumadda.
Gabi ahaanba waan ku raacsanahay José. Waxaan ku iibsaday iPhone-kii ugu horreeyay ee 2007 gudaha Mareykanka 400 USD waana qalab casri ah. Wixii intaa ka dambeeyay ma joogsan kor u kaca qiimaha ilaa maanta 700 ay tahay tan ugu raqiisan laakiin waxay ku kici karaan ilaa 1000! Aynu wajahno, waxay la mid tahay buug fiican oo wanaagsan! Waxaan dareemayaa inay shirkaduhu ka faa’iideystaan ​​taleefannada (Samsung waa isku qiimo). Waxaan rajeyneynaa tartan inuu bilaabi doono inuu hoos u dhigo qiimaha maaddaama ay gaarayaan qiimeyaal naga dhigaya inaan beddelo moobiilkeenna 2 ama 3 sano kasta ...
sida iPhone dijo
Mmm… Niman yahow !? Ma garanayo adiga, laakiin dadka aan aqaano ma beddelaan iPhone illaa uu uga dhinto xumaan ba'an, waxaan tusaalaha u bixinayaa, wali waxaan isticmaalaa iPhone 4 maxaa yeelay wali ma arko iPhone kaas oo iga dhigaya inaan ka fikiro, waayo qiimahaani waa tayada iyo adeegyada ay mudan tahay in la iibsado, MAYA mudane, muddo sanado ah in waxa aad sheegeyso dadku aysan mar dambe isbedeleynin sannad kasta, waxa aan dhihi lahaa, waxaa jira dad sameeya, laakiin aniga ahaan waxay ii tahay wax nacas ah, maskaxda ku hay in mobilka horeyba uusan u ahayn qalab aad iibsato, laakiin miyir la'aan waa aalad lagama maarmaan u ah nolol maalmeedkeena, haddii la waayo waxaan ku qasbanaaneynaa inaan soo iibsanno mid kale (haddii aynaan lacag haysan oo waxaan u baahan nahay mid kale waxaan ku qasban nahay inaan soo iibsanno mid leh astaamo aan ku raaxeysanayn laakiin xaqiiqdii way ka fiican yihiin kuwii aan ku haysannay iPhone-kii hore).
Haddii aan sameeyo qaabkan, ma jecli (maxaa yeelay waa inay noqotaa jacayl aragtida koowaad ee bixinta pay 1000) Waxaan sii dheereynayaa cimrigayga iPhone 4 sannad ka badan.
Marka waxaa jira dad laga tiro badan yahay oo badala iphone-ka sanad walba, sida caadiga ah waxay bedelaan 3-dii sano ee uguyar. Haddii aad ka bixisay 2013 € 768 (qiyaastii in la yiraahdo tiro) tani waxay noqonaysaa in 3 sano gudahood aad qalabaysid qalabka sidii aad kiro u ahayd .21,33 XNUMX bishii.
Markaad u fiirsato sidan, haddii ay kuu sheegi lahaayeen haddii aad rabto taleefanka aad jeceshahay, waxaad diyaar u noqon doontaa inaad bixiso 3 sano ka dib, many 22 qaar badan ayaa dooni lahaa, laakiin haddii loo sheego inay iibsadeen iPhone 6S for 960 (in la yiraahdo jaantus) iyo inay bixin doonaan nooc kale sannadkan, waxay ka dhigan tahay inay bixiyeen € 80 bishii oo hoos loo dhigi doono oo keliya haddii ay suurtagal tahay in gacan labaad lagu iibiyo oo xoogaa lacag ah lagu soo celiyo.
Hadda, waxaan keydsanayay 5 sano si aan u iibsado iPhone-ka soo socda, laakiin haddii aanan jeclayn ama qiimaha kor u kaco, waxaa laga yaabaa inaan iibsado iPhone 6S, oo hubaal hoos u dhigi doonta qiimaha aalad u sii socon doonta mid kale 4 ama 5 sano. Hahaha
Ma aqaano inay sida ugu dhakhsaha badan u noqon doonto iyo ka dib, laakiin ma jiro shirkad weligeedba meel sare ku jirtay.
Haddii aan arko maalintaas, (oo aan hubo inaan ku arki doono heerkan), ma farxi doono. Laakiin ugu dambayntii waxaan hubin doonaa in kuwa maamula shirkadaha ay yihiin bini-aadam oo waxaan hore u ogaanay inaynu bini-aadamku dembaabno.
Waa wax cajiib ah, ma waxay yeelan doonaan waji aad u adag?
Laakiin taasi miyaan dhadhamiyaa, sidee tahay inay tahay inaad cusboonaysiiso sannad kasta ama labadii sanoba mar? Halkaas ayaa lagu qoray? Maalin kasta waxaan isticmaalaa iphone 3gs iyo 4s labaduba waxay u shaqeeyaan sifiican maalinta koowaad. Maxay tahay sababta aan u doonayo inaan u beddelo iyaga? Maxaa wax looga beddelayaa wax shaqeynaya? Naqshadeynta? Ha i dhibin! Haddii aan iibsaday iyaga markii 1aad waxay ahayd si sax ah maxaa yeelay waxaan ka helay naqshadooda. Intaa waxaa dheer, waxaa jira daboolis, vinyls iyo kiisas milyan jeer ka jaban marka loo beddelo taleefankaaga gacanta ee kuwa "ka walaacsan" naqshadeynta bulsh-ka ...
Ipad mini 1gen wali wali waan u isticmaalaa maalin kasta, kaliya kiiskan sababtoo ah barnaamijyo liita oo la qorsheeyay / loogu talagay websaydh ama waxkastoo, waxaan qabtay ipad mini 4 si aan awood ugu yeesho inaan si degan u dhex maro anigoon xiraynin boggaga labadii saddexdiiba mar. Haddii kale, waan sii wadi lahaa inaan u isticmaalo sida maalin walba loo isticmaalo.
Inta soo hartay, waa wax aan caqli gal aheyn in lagu beddelo mobilkaaga sida dharka xagaaga.
5 sano kadib waxaan iibsaday iPhone 6s kaas oo aniga igu sii yaraan doona 5 sano ama kabadan. Oo markay 3gs iyo 4s qiiqaan oo ay mar dambe qaadan kari waayaan, waxaan tixgelin doonaa iibsashada iphone-ka ay iibiyaan xilligaas ...